ထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီသုံးပါတီဖျက်သိမ်းခံရပြီ | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ထိုင်းနိုင်ငံရေးပါတီသုံးပါတီဖျက်သိမ်းခံရပြီ	December 2, 2008
ညွန်ပေါင်းပါတီသုံးပါတီဖြစ်သော People Power Party, Chart Thai Party, Matchima Thipataya Party အားမဲအတု များလိမ်ညာမှုဖြင့်ထိုင်းဥပဒေတရားရုံကဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး၎င်းတို.၏အလုပ်မှုဆောင်ဘုတ်အဖွဲ.များကိုလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ပိုင် ခွင့်(၅)နှစ်ပိတ်ပင်ခံရပါသည်၊အရင်တုန်းကလည်းဤဥပဒေပိုဒ်မနဲ.သာတပ်ဆင်ဦးဆောင်သောထိုင်းရက်ထိုင်းပါတီကိုဖျက်သိ မ်းခဲ့ဘူးပါသည်၊
အစိုးရလိုလာသောအင်္ကျီအနီးရောင်အုပ်စုကတရားရုံ၏ဆုံဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်၍တစုံတရာလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ တရားရုံက(၁၅)မိနစ်အတွင်းလူစုခွဲရန်အမိန်.ထုတ်ပြန်ပါသည်၊လူစုမခွဲပါကတရားရုံကိုမထီးမဲ့မြင်ဖြင့်အရေးယူခံရမယ်ဖြစ်ကြောင်း ညေကြာတဲ့အခါချက်ချင်းပင်လူစုခွဲကြသည်၊ပြည်သူအင်းအားပါတီဖျက်သိမ်းခံရပြီးနောက်ဒုဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သော ချာဝရတ် ကျန်ဝီရကုန် Chaovarat Chanweerakul ယာယီဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါသည်၊
ဒီလိုနိုင်ငံရေးပါတီများဖျက်သိမ်းခံရခြင်းသည် ထိုင်ပြည်သူ.မဟာမိတ်အဖွဲ.အတွက်အောင်ပွဲတစ်ရပ်အဖြစ်ကြေညာပါသည်၊ ၎င်း၏မျှော်လင့်ထားသောနိုင်ငံရေးစနစ်အသစ်တစ်ရပ်ဖန်တီးနိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို.ပြောပါသည်၊ သူတို.အနေနဲ.လေဆိပ်သိမ်းပိုက်မှုကိုရုပ်သိမ်းမည်ဖြစ်ပြီးကိုယ်.အိမ်ကိုယ်ပြန်ကြမယ်လို.ကြေညာပါသည်၊ဒါပေမဲ့အခုအချိန်အထိ တော့အောင်ပွဲခံပျော်ပွဲရွင်ပွဲများလုပ်နေကြပါသည်၊ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြင့်ငိုးကြသူများငိုးပြီးအောင်ပွဲခံအော်သံများဆူညံနေပါသည် သူတို.အနေနဲ. ကိုယ်အိမ်ကိုပြန်ကြပြီးလမ်းခွဲတော့မည့်နှုတ်ဆက်စကားများတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်စင်ပေါ်တက်ဟော ပြောနေကြပါသည်၊
တစ်ချို.ကြတော့ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များဖြစ်သည့်အားလျှောက် အကယ်၍မဟာမိတ်အဖွဲ.ဝင်များကကျမတို.နေရာအလည်လာ ရောက်ရင်ပိုက်ဆံမယူအခမဲ့ကြိုဆိုပေးပါမယ်လို.အချင်းချင်ဖိတ်ခေါ်ကြပါသည်၊အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့၊ကျမဟာချုမ်း ဘွန်းရထားဘူတာမှားငှက်ပျော်သီးရောင်နေပါသည်၊မဟာမိတ်အဖွဲ.ဝင်များလာရောက်လည်ပတ်ရင်ကြိုက်သလောက်ဝင်စား နိုင်ပါသည်၊နောက်တစ်ယောက်ကတော့၊ကျမဟာဖူးကတ်မှာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ပါ၊ကျမဟိုတယ်ရှေ့မှာ မဟာမိတ်များ၏သင်္ကေတ ဖြစ်သောလက်သီးခုတ်ပုံကိုအကြီးဆောက်လုပ်ပေးပါမယ်၊ကျမဟိုတယ်မှာမဟာမိတ်များလာရောက်တည်ခိုရင်အခမဲ့ဝန်ဆောင် ပေးပါမယ်လို.ကြေညာကြပါသည်၊ဒါဟာ(၇)လနီးပါးရက်ကြာသောတိုက်ပွဲကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ.ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆင်နွဲ နေကြတဲ့မြင်ကွင်းပါ၊
မဟာမိတ်တို.၏တိုက်ပွဲဟာ အစိုးရလိုလာသောပြိုင်ဘက်အုပ်စု၏အကြမ်းဖက်မှုကြောင့်(၄)ယောက်သေးဆုံပြီး(၆၀၀)နီးပါးဒ ဏ်ရာရရှိပါသည်၊သူတို.လိုလာသောနိုင်ငံရေးအသစ်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကူးပြောင်းကာလမှာမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့် သွားမယ်လို.ပြောဆိုနေကြပါသည်၊
PARTY DISSOLUTION People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya parties disbanded
Published on December 2, 2008 The Constitution Court on Tuesday ruled to disband three coalition parties, People Power, Chart Thai and Matchima Thipataya, and banned the three’s party executives from electoral process for five years. The high court held the three parties for accountability on electoral fraud involving party executives, Yongyuth Tiyapairat of People Power, Monthien Songpracha of Chart Thai and Sunthorn Wilawan of Matchima Thipataya.
In the fraud case linked to People Power Party, the high court cited the Yongyuth conviction by the Supreme Court as the ground to penalise the ruling party.
For cases linked to Chart Thai and Matchima Thipataya, it invoked the rulings by the Election Commission as the basis to punish the two parties.
The nine presiding judges reached unanimous decisions against People Power and Matchima Thipataya parties. And they formed the eight-to-one decision to punish Chart Thai.
The high court opined that the punishment by disbandment was mandatory as sanctioned by Article 237 of the Constitution and that it had no leeway to selectively punish the party executives on the individual basis.
OPINION/ANALYSIS; Toward A Democratic Change in Burma